Isiko laseJalimane | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | 21/09/2021 17:00 | Kubuyekezwe ku- 21/09/2021 19:11 | Alemania, Cultura
Alemania iphakathi neYurophu futhi ngemuva kweRussia iyizwe eline inani elikhulu kakhulu lezakhamizi zaleli zwekazi, nabantu abayizigidi ezingama-83 abahlala ezifundeni zayo eziyi-16. Kube yiPhoenix impela yomlando ngoba akungabazeki ukuthi ngemuva kwempi nokuhlukaniswa kwezwe iphinde yazalwa ngenkazimulo enkulu.
Kepha linjani isiko lamaJalimane? Ngabe kuyiqiniso ukuthi bangabantu abahlelekile futhi abaqinile? Ingabe ikhona indawo yokuhlekisa okuhle nokuzijabulisa noma cha? I-athikili yanamuhla ku-Actualidad Viajes imayelana nesiko laseJalimane.
2 Isiko laseJalimane
Umlando waleli lizwe mude futhi uhlale, ngandlela thile, ebambe iqhaza emcimbini obaluleke kakhulu wase-Europe. Kwabaningi, nokho, iJalimane ingena emlandweni ihambisana ne Umbuso wamaNazi ngo-1933, uhulumeni oyisa kwi Impi Yezwe Yesibili nokuba ngumabi wefa kwesinye sezinhlekelele ezisabekayo empucukweni yabantu, i UkuQothulwa Kwesizwe.
Kamuva, ngemuva kwempi, kwakuzofika ukuhlukaniswa kwendawo phakathi kweGerman Federal Republic kanye neGerman Democratic Republic, ingxenye yobungxiwankulu nengxenye yamakhomanisi ngaphansi kokubusa kweSoviet. Ngakho-ke impilo yakhe yayizodlula ize ifike cishe ngasekupheleni kwekhulu lamashumi amabili lapho, thina esineminyaka engaphezu kwama-40 ubudala, sabona kumabonakude Ukuwa koDonga lwaseBerlin nokuqala kwenkathi entsha.
Namuhla iGermany imi njenge- amandla ezomnotho emhlabeni, umkhokheli wezimboni nobuchwepheshe, onesistimu enhle yezokwelapha yendawo yonke, imfundo yomphakathi yamahhala nezinga elihle lokuphila.
EJalimane kune- izinkolo ezahlukahlukene, amasiko namasiko umkhiqizo wokufika kwamanye amazwe, kepha noma kunjalo, ngalo mcebo, kunezimo ezithile ezingabonakala ekuziphatheni kwaseJalimane.
IJalimane izwe labacabangi, izazi zefilosofi kanye nosomabhizinisi. Njengesimo esikhulu esivamile, kungashiwo ngaphandle kokwesaba iphutha lokho AmaJalimane anengqondo futhi anengqondo futhi lokho, ngakho-ke, nakho zihlelekile futhi zihlelekile. Ngalo mqondo, into engaguquguquki eyinhloko umuntu angayibiza ngegama ukuhamba kwesikhathi.
NjengamaJapane, AmaJalimane ngabantu abagcina isikhathi futhi lokho kwenza konke okudinga ukusebenza ngesikhathi ukwenza lokho. Ngikhuluma ngezokuthutha noma ukunakekelwa ezakhiweni zomphakathi. I-oda liyalandelwa futhi ngokwenza njalo kuqinisekisa imiphumela emihle kakhulu. Izitimela azephuzi lapha, amabhasi noma izindiza azephuzi, futhi amawashi ngaso sonke isikhathi asebenza kahle. Izinhlelo zilandelwa kule ncwadi, kulandela leso siqubulo esifundeka okufana nokuthi "ukugcina isikhathi kungumusa wamakhosi."
Ngakho-ke, uma uzoxhumana nesiJalimane, kungcono ugcine isikhathi futhi uhloniphe amashejuli owasungulile. Ngisho nomthetho ongashiwongo ukuthi kungcono ukufika kusasele imizuzu emihlanu ngaphambi kwesikhathi esimisiwe kunokufika sekwedlule isikhathi ngomzuzu owodwa.
Ngakolunye uhlangothi, yize amaJalimane enedumela lokuthi ayabanda imibono yomndeni neyomphakathi igxilile. Umphakathi ulandela imithetho ngakho-ke azikho izinkinga zokuhlalisana kungaba endaweni, edolobheni, edolobheni noma ezweni lonke. Imithetho yenziwe ukuthi ilandelwe.
La ukulingana ngokobulili kuyinto ecatshangelwayo necatshangelwayo. Eqinisweni, muva nje iKhansela uMerkel uqobo uzibonakalisile, ngemuva kokuthula isikhashana, njengowesifazane. Izwe liyawahlonipha amalungelo omphakathi I-LGTB futhi isikhashana manje i- izinqubomgomo zokuthuthela kwelinye izwe.
Ngokusobala, akukho okulula, kunamaqembu aphiko elifanele emphakathini waseJalimane angathandi ubuhlanga obuhlukahlukene kepha kuleli phuzu emhlabeni ... kunengqondo yini ukukhuluma ngobumsulwa nalezo zinto? Ngaphandle kokuba yisilima. Ama-75% wabantu baseJalimane asemadolobheni futhi kulapho abantu bakhululeke ngokwengeziwe futhi bavulekele khona kulezi zindaba.
Isikhathi esithile manje, iJalimane ikhathazekile nge ukunakekela imvelo nokukhiqiza amandla avuselelekayo, ukutshala imali kumafutha amasha noma ukunciphisa ukungcola, ukukhuthaza ukusetshenziswa kabusha nokunye.
Mayelana nohlelo lwezemfundo, inenye yezinhlelo ezinhle kakhulu zemfundo emhlabeni kanye nokuziphatha okuqhamuka esikhathini esedlule futhi kubonakala sengathi akufuni ukukhulula. Noma kunjalo, lapha kusebenza amahora angama-35-40 ngesonto futhi lezi zinombolo ziphakathi kweziphansi kunazo zonke eYurophu ngaphandle kokulahlekelwa umkhiqizo. Futhi lokho kuphakathi kwamadolobha athatha amaholide amaningi.
Sesiyazi ukuthi balithanda kangakanani ilanga nokuthi bafuna kanjani, ngokwesibonelo, amabhishi aseSpain. Ukuhamba ngaphandle kwezwe kubalulekile kubo kuze kube seqophelweni lokuthi imininingwane ikhombisa ukuthi amaJalimane enza ukuhambela kwamanye amazwe okwengeziwe i-capita kunabanye abaseYurophu. Uyaphi? Yebo, eSpain, e-Italy, e-Austria ...
Yiziphi izimpawu zamasiko kusuka kuleli? Yize liyizwe lobuKristu ngokomlando, namuhla linabantu abaningi abangamaSulumane ngakho-ke inyanga nenkanyezi yamaSulumane sekuyingxenye yesiko lamaJalimane elingokomfanekiso. Singasho futhi amagama abantu abanjengokomfanekiso UMarx, uKant, uBeethoven noma uGoethe, isibonelo.
Futhi kuthiwani nge- Isiko lokudla laseJalimane? Lokhu kuzungeze ukulungiswa kokudla lapho inyamae ithandwa kakhulu futhi ihlala ikhona njalo ekudleni kosuku, kanye ne- I-pan futhi i amazambane, the ama-sausages, the ushizi, the ukhukhamba. Ukuphuma siyodla isidlo sakusihlwa kuyathandwa futhi namuhla kunezelwa izindawo zokudlela zezinye izinhlanga, ngakho-ke ukudla kuhluka kakhulu.
AmaJalimane, yaziwa, efana kakhulu Ubhiya ngakho kuyaphuzwa ngaphandle nangaphakathi endlini. Ngemuva kwebhiya kuza iwayini, ugologo ... kepha ubhiya uyindlovukazi ephelele njengoba wazi. Kepha kukhona amasiko amaningi aseJalimane esingakhuluma ngawo? Vele kukhona, kuqala imikhosi yenkolo, bobabili abamaKristu nabamaProthestani, noma manje abamaSulumane, noma namasiko asemhlabeni njengalawo athandwayo isikhathi setiye owaziwa ngokuthi kaffee und kuchen.
Ngesikhathi se- imvunulo yesintu kufanele uqambe abadumile busie, esetshenziswa ngabantu bezwe, ehlobene eduze namasiko aseBavaria noma eTyrolean. Endabeni yabesifazane, imvunulo ejwayelekile ithi dirndl, isudi eneblawuzi enemibalabala nesiketi okusobala ukuthi ayisasetshenziswa ngisho nasemaphandleni, kepha isetshenziswa emikhosini kabhiya noma eminye imicimbi yesintu.
Ekugcineni, lokhu kungokujwayelekile futhi ngokuqinisekile, uma uzohamba kulo lonke elaseJalimane, uzothola ukuhluka, abantu abavulekile ngokwengeziwe, abantu abavaliwe, amadolobhana amahle asezintabeni, amadolobha athule kakhulu, eningizimu, eningizimu-ntshonalanga nasentshonalanga imikhosi eminingi ethandwayo ephindaphindwe .ngamakhulu eminyaka (ngokwesibonelo umbukiso wesikhumbuzo seminyaka engama-30 yempi yempi), izimakethe ezimibalabala ezithengisa ukudla okujwayelekile noma amadolobha ahlukahlukene ngempela. Kukhona ongakhetha kukho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Alemania » Isiko laseJalimane
Amathiphu wokuhlela uhambo lokuhamba ngesikebhe
Amabhishi amahle kakhulu eGranada